ရပ်တည်စေလိုကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရပ်တည်စေလိုကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း
Posted by စဆရ ကြီး on Aug 29, 2012 in Myanma News | 8 comments
ကိုရင်ရှူံး နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါ၊ ထို့အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံရေးနှင့်ပါတ်သက်နေသည့် ရွာသားတစ်ယောက် ကိုရင်ရှူံး AVATOR ပုံယူသုံးထားခြင်းကြောင့် ရွာထဲတွင် စာတစ်တန်၊ ပေတစ်ဖွဲ့ဖြင့် ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် မူရင်းလေးကို ပြောင်းလိုက်ကြောင်းကိုပါ များမကြာမီကာလက Post တစ်ခုအနေနှင့် တင်ဖူးပါသည်။ ဖတ်ဖူးသူ သိကြပါလိမ့်မည်။ ပဲစားပြီးကြီးလာသောကြောင့် ပဲဟင်းနံ့တော့ နံနေပေလိမ့်မည်၊ ယနေ့ခေတ်တွင်မတော့ ပဲတောင်မစားရသူများ အနံ့နံနေကြခြင်းကိုမဆိုလိုပေ။
ဆက်ဆွဲပါဦးမည်၊ ဤသည်ကား စကားချပ်မျှသာဖြစ်သည်၊ စာတစ်ပုဒ်ကို မရှည်၊ ရှည်အောင် ရေးသားနေခြင်းဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။ ကိုရင်ရှူံးသည်ကား အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုဆို၊ အဖနိုင်ငံတော်ဆိုဆို၊ ဆိုချင်သလိုဆိုနေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြင်ပသို့ထွက်နေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုစာရှိတော့ပေမည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် မြေပုံကားချပ်တစ်ခုကို ဖြန့်ကျက်ကာ ကြည့်နေသည့်အလား မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းများကို အိမ်သာပျက်ကြီးမှတစ်ဆင့် ထိုင်ကြည့်နေမိသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖျက်ဆီးပုံအခြေခံဥပဒေများ မဲပေးစဉ်ကလည်း ကိုရင်ရှူံးမရှိခဲ့၊ ရွေးဂေါက်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လည်း ကိုရင်ရှူံးမရှိခဲ့ပါသောကြောင့် ယခုလက်ရှိ လွှတ်တော် အမြတ်များသည် ကိုရင်ရှူံးနှင့် စိုးစဉ်းမျှ သက်ဆိုင်ခြင်း အလျဉ်းမရှိပေ။ နိုင်ငံရေးသမားစကားနှင့်ဆိုပါမူ ဘောင်းဘီဝတ်ရော၊ ဘောင်းဘီချွတ်ရော ကိုရင်ရှူံးအမျိုးတစ်ယောက်မှမပါပေ။ သို့ဆိုလျင် ကျန်သူများ ဘောင်းဘီမ၀တ်ဟုဆိုလိုစရာရှိသဖြင့် တိတိကျကျပြောရလျင် အတွင်းခံဘောင်းဘီလောက်တော့ ၀တ်သူများထဲတွင် ကိုရင်ရှူံးအမျိုး အနည်းအကျဉ်းတော့ပါပေမည်။ ဥပမာ ဒုကြီး။
ဆွဲလျက်စနှင့် ဆက်ဆွဲပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်စိမ်းရောင်များ ကြီးစိုးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ခန့်ဖြစ်သည်ကို အဘယ်သူငြင်းအံ့ပါသနည်း? ထို့အတွက်ကြောင့် ကိုရင်ရှူံးမှာလည်း ထိုအသိုင်းအ၀န်းမှပင် ပေါက်ဖွားလာသော ပဲဟင်းစားသူဖြစ်သည့်အတွက် စွဲချက်တင်လိုက တင်ကြပါကုန်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ M 16 လောက်သာ ကိုင်ကြရသူများကို ပစ်လိုက်ရင်တိုများ ခါးကြားထိုးပြီး လျှောက်သွားနေသူများနှင့်တန်းတူ သမုတ်ခံနေရခြင်းကို မခံချိမခံသာဖြစ်မိသည်။ တပ်ရင်းတွင် ဖက်ထုပ်အပါတ်တိုင်းစားနေရသူများအား ခေါင်းဖြူ မာဇဒါဂျစ်ကြီးများစီးပြီး ဟိုနေရာမှာစား၊ ဒီနေရာမှာစား လုပ်နေသူများနှင့်တန်းတူ ကလော်တုတ်ဆဲခံနေရခြင်းကို နာလိုခံခက်ဖြစ်တော့သည်။ ရှေ့တန်းတွင် ပွိုင့်ပြေးရင်း ဗုံးနင်းမိသူများ၊ ကြိုးဆွဲမိုင်းမိသူများ၊ ပျောက်ကြားထိုးစစ်များခံရလျင် ပထမဆုံးသားကောင်ဖြစ်သည့် တသသ (တစ်ချို့ကမူ ရွာကို တစ်သသဖြစ်နေသူများဟုထင်တတ်သည်၊ အမှန်မှာတော့ တပ်သားသစ် အတိုကောက်)များ ကျဆုံးခဲ့ရသည်မှာ အဘယ်မျှ များလေသနည်း။ သူတို့မှာ နိုင်ငံရေးလဲမသိပါ၊ အစိုးရလဲမသိပါ၊ သူတို့သိသည်မှာ အထက်အမိန့်နာခံတတ်ခြင်းဆိုသည်သာသိပြီး အမိန့်ကို အသက်နှင့်လဲထားကြသူများသာဖြစ်သည်။ KNLA နှင့်တိုက်ပွဲကာလများက Video များ You-tube ပေါ်တွင်တွေ့ရစဉ်က များစွာသနားခြင်းဖြစ်ရသည်။ နိုင်ငံ့သားကောင်းများ ဘာနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှမသိပဲ အမိန့်နာခံတတ်မှုတစ်ခုတည်းအတွက် ကျဆုံးသွားကြရခြင်းဖြစ်သည်။ သေသည့်တိုင် ဘာအတွက်သေသွားရမှန်း အမှန်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။
လိုရင်းကို ဆက်ဆွဲပါမည်။ ယခုနှစ်ရက်အတွင်း ငိုချင်းဂျပုနှင့် လျှပ်စစ်ပိုလျှံခြင်း ကိုဇော်မင်းတို့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအတွင်းမှ ကျားကွက်အရွှေ့ခံလိုက်ရသည့်အတွက် လွန်စွာမှပင် နှစ်ထောင်းအားရခြင်းဖြစ်လှသည်။ ဦးသိန်းစိန်အကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိပါ၊ သို့သော်သူကဲ့သို့သော အရာရှိကြီးများ တပ်မတော်တွင်များစွာရှိခဲ့သည့်အနက်မှ သူတစ်ယောက် ဖြုတ်၊ ထုတ်၊ သတ် စာရင်းထဲမပါခဲ့ပဲ ယခုလို နိုင်ငံကို ပုခုံးပြောင်းဦးဆောင်ခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် လွန်စွာဝမ်းမြောက်လှပေသည်။ သူလိုလူများ တပ်မတော်တွင်း မြောက်များစွာ ရှိနေသေးလျင် မည်မျှကောင်းလေမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်ကိုရင်ရှူံးပြောသည်ကို ကိုရင်ရှူံးကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူသည်။ စီနီယာကြီးများဘ၀နှင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့ရသော မျိုးချစ်စစ်သည်ကြီးများနှင့် အမှန်ကို၊ မှန်သည့်ဘက်ကို ရဲရဲဝန့်ဝန့်ရပ်တည်ခဲ့သော (တစ်ကယ့်) မျိုးချစ်စစ်သည်များ၊ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲ အရာရှိကြီးများ၊ နိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများ ဦးသိန်းစိန် ကောင်းတာလုပ်နေသမျှ ကာလပါတ်လုံး ၀ိုင်းဝန်းရပ်တည်ပေးစေလိုကြပါကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းများဖြင့်…
အပြည့်အဝ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံ သွားပါတယ်။
ကိုရှုံး နဲ့ အတူ လဲ ဆုမွန် တောင်းပါတယ်။ :-)
ကိုရင်ရှူံးသည်ကား အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုဆို၊ အဖနိုင်ငံတော်ဆိုဆို၊ ဆိုချင်သလိုဆိုနေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြင်ပသို့ထွက်နေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုစာရှိတော့ပေမည်။
ကျုပ်ကအသက်တ၀က်မက.. အပြင်ထွက်နေသမို့.. အဖမြန်မာပြည်ကမွေးပြီး.. အမိအမေရိကပြည်ကြီးလုပ်မလားလို့ပါ…
တော်ကြာ.. အမိမြန်မာပြည်ဆို. ခံနေရမှာစိုးလို့ဗျို့..
မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့.. အင်ပါယာထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့.. ပြင်သစ်၊ ဂရိ၊ ဂျာမန်တွေက.. Fatherland သုံးတယ်..တဲ့..
Motherland ကိုတော့.. သိပ်သုံးကြပုံမပေါ်ဘူး..
ကမ္ဘာမြေကို.. Mother Earth လို့တင်စားကြလို့လားတော့မသိ.. :?
မာသာရွာရှား ရှို ….
အင်း ..ကျုပ်တို့ က သူ၇ို့ဆီက ခိုးချတာ ရှိုဒေါ့ …
ပေါင်းဇယာရှားလို့ အဘရာ …
အရက်သမားဒွေ ဆြာတင်ရတယ်လို့ ..
ကိုရင်ရှုံး .. လျှပ်စစ်က ကိုဇော်မင်းပါ ..
မောင့်ထက် သိသူ မောင့်လောက် မသိနိုင်ပါဘူး…
မောင့်လောက် သိသူ နောက်တယောက် မရှိနိုင်ပါဘူး…
ဂုဒေါ့ … သွားရှာဘီကိုး…
ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီးကတော့ …
ခေါင်းပေါ်လက်၂ဖက်တင် ပီး ကွေးနေအောင် ကနေလောက်ပီ…
ကျုပ်တို့ပါ ၀င် ရှိတ်လိုက်ရအောင် …
ဒူချပ် …ဒူဒူချပ် …ဒူချပ် …ဒူဒူချပ် …
အနာဂတ် ရောင် ခြည် လေး တွေ သန်း စပြု နေပြီပေါ့ ။ ဒီ့ထက် ပြိုပီးလင်း လက် လာ ရင်တော့ ပြည် တွင်း မှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက် ပွဲ တွေ ရပ် ဆိုင်း သွား ပြီး ရှေးတန်းတွေမှာ အမ်ိန့် နာခံ မှု တစ်ခုတည်း နဲ့ ကျဆုံး ရတဲ့ စစ် သည်တွေ ၊ မျိုး ချစ်စိတ် တစ်ခုတည်း နဲ့ လက်နတ် ဆွဲ ကိုင် အသေခံကြရတဲ့ တိုင်း ရင်း သားတွေ ( သူတို့ လည်း တကယ်ခံရတဲ့ သူတွေ က ငယ် သားတွေ ပဲ များတယ်။ခေါင်း ဆောင်တွေ က နယ်စပ်တွေ မှာ စည်း စိမ် အပြည့် နဲ့ …….) သူတို့….သူတို့ … တွေ ရဲ့ အသက်တွေ ၊အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ ရဲ့ ဘ၀ တွေ စတေး နေရတဲ့ အဖြစ်တွေ က နေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် စေဖို့ မျှော် လင့် မိပါတယ်။
အမေ Mobile (MGZ ပါတီ) says:
ကောင်းကောင်းအမိန့်ပေး၍ တိုင်းပြည်ကြီးကို ကောင်းကောင်းနှိပ်စက်တတ်ပေသည်